के स्प्लिटि p्ग पिलहरू सुरक्षित छन्? औषधि विभाजन गर्नका लागि गाईड - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु समुदाय कम्पनी चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के यो मेरो ट्याब्लेट ठीक छ?
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्सको उच्च लागत कम गर्न केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दै पूरै औषधी खान बन्द गर्छन्। अरूले पैसा बचाउन आधा मा गोली लिन्छन् p र अनुचित गोली स्प्लिटिंग एकदम खतरनाक हुन सक्छ। तर जब ध्यानपूर्वक (र तपाइँको डाक्टरको अनुमोदनबाट) ह्यान्डल गर्दा, यो प्राय: ठीक छ।
किन विभाजित गोली?
गोलिहरु विभाजन को लागी धेरै कारणहरु छन्। यदि मलाई प्रत्येक पटक drug० मिलीग्राम चाहिन्छ भने, १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू किन्दा र आधामा विभाजन गर्दा महत्त्वपूर्ण लागत बचत हुन सक्छ, क्रेग स्वेन्सन , Pharm.D।, डीन इमेरिटस र औषधीय रसायन विज्ञान र प्राडु युनिभर्सिटी कलेज अफ फार्मेसीमा आणविक फार्माकोलजीका प्रोफेसर।
कहिलेकाँही, एक डाक्टरले तपाईंलाई खुराक सिफारिश गर्न सक्दछ जुन निर्माताओं द्वारा उत्पादित ट्याब्लेटहरू भन्दा कम हो। वा, यदि कसैले ठूलो गोलीलाई निल्न संघर्ष गरिरहेको छ, तिनीहरूले यसलाई अधिक व्यवस्थित अंशमा विभाजन गर्न सक्छन्, डा स्वेन्सन भन्छन्।
स्पिल्टि p पिल्स खतरनाक हुन सक्छ
सबै गोलीहरु आधा सुरक्षित रूपमा काट्न सकिदैन, विशेष गरी लेपित ट्याब्लेटहरू र समय-रिलीज क्याप्सूलहरू।
इन्टरिक-लेपित ट्याब्लेटको रूपमा लेबल गरिएको कुनै पनि औषधि विभाजन नगर्नुहोस्। केहि over-the-काउन्टर दर्द रिलिभरहरू र पछाडि दुख्ने औषधि सहित। ती डिजाईन गरीएको छ ताकि ट्याब्लेट आंतुलममा नआउन्जेल विघटन हुँदैन त्यसैले तपाईंको पेट सुरक्षित छ, डा स्भेन्सन भन्छन्। यदि तपाईंले पिल तोड्नुभयो भने, तपाईंले कोटिंगको लागि डिजाइन गरिएको लाभ हराउनुहुनेछ।
समय रिलिज, ढिलाइ रिलिज र विस्तारित रिलीज औषधि , अक्सर नामको छेउमा XR द्वारा संकेत गरिएको, कहिले पनि क्रस वा बिग्रिनु हुँदैन। जब तपाईं लामो-अभिनय गोली कटौती गर्नुहुन्छ, तपाईं अन्त धेरै खुराक र अधिक छिटो बाहिर आउन सक्नुहुन्छ जुन खतरनाक हुन सक्छ, वर्णन गर्दछ। डा। मारिया Torroella Carney , geriatric और palliative चिकित्सा र नर्थवेल स्वास्थ्य को डिभिजन प्रमुख।
विभाजन गर्न सकिने औषधिहरू
त्यसोभए तपाईलाई कसरी थाहा छ कि कुन गोलिहरू विभाजित गर्न सकिन्छ? एउटा संकेत एउटा स्कोर गरीएको ट्याब्लेट हो, जसको अर्थ गोली गोली बीचमा वा क्वाटरमा स्कोर हुन्छ। तर पत्ता लगाउनको लागि उत्तम तरिका भनेको तपाईंको फार्मासिष्टलाई सोध्नु हो, डा। स्वेन्सन भन्छन्। दुबैको नाम र विशिष्ट प्रकारको बनाउने जाँच गर्नुहोस्, किनकि यो बिभिन्न उत्पादकहरूबाट फरक हुन सक्छ, उनले भने।
के म गर्भवती हुँदा पेप्टो बिस्मोल पिउन सक्छु?
कसरी एउटा गोली सुरक्षित रूपमा विभाजित गर्ने
पहिले तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् । कुनै फरक पर्दैन तपाईले आफ्नो गोलीहरु छुट्याउँदै हुनुहुन्छ - यो ओटीसी गोली वा निर्धारित औषधि हो - तपाईले ठीक डोज पाउनु भएको छ भनि पनी तपाईको डाक्टरसँग काम गर्नु पर्छ।
जब तपाइँ तपाइँको प्रदायकलाई बताउने बिना औषधि विभाजन गर्नुहुन्छ, यसले परिणामलाई भ्रमित गर्न सक्छ, डा। कार्नेले भने। नर्सहरू र डाक्टरहरूले तपाईंको औषधि समायोजन गर्दछन् उनीहरूले सोच्दछन् कि तपाईंले लिदै हुनुहुन्छ भन्नेमा आधारित छ, त्यसैले तिनीहरूसँग इमानदार हुनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सही ढ your्गले आफ्नो औषधी तोड्दै हुनुहुन्छ पछि तपाइँ तपाइँको डाक्टर बाट जानु छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि त्यहाँ हुन सक्छ वजन मा ठूलो उतार चढाव र विभाजन औषधि को खुराक ।
यदि गोली स्कोर गरिएको छ भने, यसको प्रत्येक पट्टि आफ्नो हातहरू समात्नुहोस् र दायाँ घुमाउनुहोस् जहाँ स्कोर यो आधा मा तोड्ने हो, डा। स्वेन्सन भन्छन्। तर यदि यो crumbles, यसलाई खारेज। केहि ट्याब्लेटहरू, उनीहरू रन बनाए पनि, आधा लगातार तोड्नुहुन्न।
वा, एउटा पिल-स्प्लिटिंग उपकरण खरीद गर्नुहोस् अनलाइन वा फार्मेसीमा। दिमागमा राख्नुहोस् कि औषधि विभाजित भएपछि डिग्रेड गर्न सक्छ, त्यसैले एकै पटकमा तपाइँको सबै औषधीहरू नतोड्नुहोस्। तपाईले लिनु भएको अनुसार यसलाई गर्नुहोस्।
एकलकेयरको साथ फ्रीस्टाईल लाईब्रेमा कसरी बचत गर्ने
Sudafed र sudafed pe मा के फरक छ?
कम आय को लागी नि: शुल्क मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स
कती चाँडै योजना बी एक कदम लिन
मैले दैनिक कति भिटामिन लिनु पर्छ?
यदि तपाइँलाई फ्लू छ भने तपाइँ कहिले सम्म काम बाट घर बस्नु पर्छ?